Indlu yaseBrae Pool (kunye neRetreat yasebusika)
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguRo
🌱 Hlela kwakhona / imbuyekezo ekhoyo yokuphazamiseka kwe-Covid.
🌱 Ukubhukisha kuka-2022 akukavulwa ngenxa yohlaziyo olunokwenzeka. Nceda uthumele umyalezo ku-0478957883 ukuba ungathanda ukuba kuluhlu lwethu loqhagamshelwano.
Wamkelekile kwi-Brae Pool House. Isitudiyo esihle, sale mihla kunye nesithokomeleyo esiziqulathileyo kwiinduli zeBellbrae esinemibono etshayelayo yeSpring Creek Valley kunye nokukhanya okukude kwezibane zaseTorquay ebusuku.
Yonwabela ichibi kunye nebhafu yangaphandle kwisango eliya eGreat Ocean Road.
Ubusuku obubini min. Buza ngobusuku obubodwa.
I-Pool House sisitudiyo esiphangaleleyo esinendawo yokutyela ekhitshini kunye negumbi lokuhlambela elahlukileyo.
I-Pool House inokukhanya okuninzi kwendalo kunye novakalelo oluphangaleleyo kunye neengcango zeglasi ezisongayo ukuzisa ngaphandle. Akukho zikhuni zokonakalisa umbono wentlambo nangona kunjalo iimaski zamehlo zinikezelwe.
Ibhedi enkulu yaseKing:
I-studio inobukhulu benkosi i-Koala ibhedi kunye nesiseko - i-stylish kakhulu, ivulekile, ikhululekile kwaye yenziwe ngelinen esemgangathweni.
I-Pool House sisitudiyo ngoko ke ayinalo ikhitshi ligcweleyo. Inayo i-oven yokuhambisa enokuthi isetyenziswe njenge-oveni eqhelekileyo okanye i-microwave, i-hotplate ephathwayo yombane ephindwe kabini, umatshini wekofu kunye ne-bbq ene-side burner.
Isikhenkcisi silingana nebha kunye nebhokisi encinci yesikhenkcisi. Ndazise ukuba ufuna indawo yokugcina epholileyo njengoko ndinendawo eyongezelelweyo yesikhenkcezisi kwindawo yokugcina iPool House.
Iqula alitshisi. Isixokelelwano somtya wamanzi elanga sibonelela ngokufudumeza ngexesha leenyanga ezishushu, ezinelanga.
Ukhuni lubonelelwe ukubasa umlilo kwaye kukho iinkuni ezisecaleni kwibhokisi esecaleni kwe-BBQ.
I-Pool House ayinayo indawo yokuhlamba impahla. Ndicela undazise xa ungathanda ukulayishwa kwe washing yenziwe kwindlu enkulu.
IBellbrae yindawo entle eselunxwemeni kwimizuzu embalwa ngaphandle kweTorquay eneendawo ezinjengeBell Beach, iBellbrae Estate Winery, iChoclaterie kunye neelokishi ezisecaleni kweNdlela iGreat Ocean ekufikeleleni ngokulula.
Umbuki zindwendwe ngu- Ro
Ndifumaneka ngemibuzo nangaliphi na ixesha (24/7) nangona kunjalo kusenokubakho ukulibaziseka okufutshane ukuba ndiyasebenza okanye elwandle.